Malalaka ny fakantsariko iPhone! Ity ny antony & Ny tena fanamboarana. - Iphone
maizina loatra ny efijery misy ahy
Ahoana ny fampifanarahana ny fitbit anao amin'ny iphone-nao
iPhone voicemail feno fa verizon foana
hanolo iphone efa simba rano ve ny paoma
© 2021 | planetlibre.es Politika Fiarovana Fiainan'Olona
Malalaka ny fakantsariko iPhone! Ity ny antony & Ny tena fanamboarana.
Manjavozavo ny fampiharana fakan-tsary iPhone ary tsy azonao antoka ny antony. Manokatra ny fampiharana Fakan-tsary ianao haka sary, nefa tsy misy mazava. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao izay tokony hatao rehefa manjavozavo ny fakantsarinao iPhone !
Fafao ny lantana fakantsary
Ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa manjavozavo ny fakantsarinao iPhone dia ny mamafa ny solomaso fotsiny. Matetika, misy smudge amin'ny solomaso ary izany no miteraka ny olana.
azonao atao ve ny mampiasa mafana mangatsiaka rehefa bevohoka ianao
Makà lamba microfiber ary esory ny solomaso fakantsarinao iPhone. Aza manandrana mamafa ny solomaso amin'ny rantsan-tànanao, satria vao mainka mety hiharatsy izany!
Raha mbola tsy manana lamba microfiber ianao dia tena amporisihinay izany entana enina amidin'i Progo amin'ny Amazon. Hahazo lamba microfibers enina tsara indrindra ianao amin'ny vidin'ny $ 5. Iray ho an'ny fianakaviana iray manontolo!
Esory ny tranga iPhone anao
Indraindray ny tranga iPhone dia mety hanakana ny solomaso fakan-tsary, hahatonga ny sarinao ho maizina sy manjavozavo. Esory ny fonosanao iPhone, avy eo manandrama maka sary indray. Raha mbola eo ianao, zahao maso indroa mba hahazoana antoka fa tsy mivadika ny raharaha!
Manakatona ary mamoha ny fampiharana fakan-tsary
Raha mbola manjavozavo ny fakantsarinao iPhone dia tonga ny fotoana ifanakalozana hevitra ny amin'ny mety hisian'ny olana momba ny lozisialy. Ny fampiharana Fakan-tsary dia mitovy amin'ny rindranasa hafa - mora voan'ny fianjerana rindrambaiko izy io. Raha lavo ilay app dia mety hiseho manjavozavo na mainty tanteraka ny fakantsary.
Indraindray ny fanidiana sy ny fanokafana ny rindrambaiko fakan-tsary dia manamboatra ny olana. Voalohany, sokafy ny mpandefa app amin'ny iPhoneo amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ny bokotra Home (iPhone 8 sy ny teo aloha) na ny fisisihana hatrany ambany ka hatrany afovoan'ny efijery (iPhone X).
Farany, esory ny rindrambaiko fakan-tsary eo an-tampon'ny efijery mba hanakatonana azy. Ho fantatrao fa mihidy ny fampiharana Fakan-tsary rehefa tsy hita intsony ao amin'ny mpandefa app. Andramo sokafana ny rindrambaiko fakan-tsary hijerena raha toa ka nahitsy ny olana manjavozavo!
Atsaharo ny iPhone
Raha tsy nahavaha ny olana ny fanidiana ny app dia manandrana mamerina ny iPhone. Mety ho manjavozavo ny fakantsarinao iPhone satria misy rindrambaiko hafa nianjera, na satria miaina karazana rindrambaiko madinidinika kely ny iPhone-nao.
Raha manana iPhone modely iPhone 8 na mihoatra ianao dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pisehoan'ny 'slide to power off' amin'ny fampisehoana. Raha manana iPhone X ianao dia tsindrio ary tazomy ny bokotra eo anilany sy ny bokotra volume mandra-pahatongan'ny 'slide to power off'.
Ataovy ao anaty maody DFU ny iPhone-nao
Raha tsy mandeha ny famerenana indray ny iPhone dia tsy maintsy atao amin'ny dingana DFU ny dingana manaraka. Raha misy olana amin'ny lozisialy mahatonga ny fakan-tsarinao manjavozavo iPhone dia averina amin'ny laoniny ny DFU. Ny 'F' amin'ny famerenana amin'ny laoniny DFU dia midika hoe mikirao praogramanao , ny fandaharana amin'ny iPhone izay mifehy ny fitaovany - toy ny fakan-tsary.
Alohan'ny hidiranao amin'ny maody DFU, alao antoka fa hamonjy backup anao amin'ny iPhone. Rehefa vonona ianao dia zahao ny lahatsoratray hafa hianarana ny fomba fametrahana ny iPhone amin'ny fomba DFU ary hamerenana amin'ny laoniny !
Alao ny fakan-tsary
Raha ny fakantsarinao iPhone dia Na izany aza manjavozavo aorian'ny famerenana amin'ny laoniny DFU, mety tsy maintsy amboarinao ny fakantsary. Mety misy zavatra miraikitra ao anaty solomaso, toy ny loto, rano, na potipoti-javatra hafa.
Manomàna fotoana ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana ary asio Genius jereo izany. Raha tsy saron'ny AppleCare + ny iPhone-nao, na raha te hanandrana hitahiry vola ianao dia amporisihinay hanin-kotrana . Puls dia orinasa any aoriana misy fangatahana izay mandefa teknisianina vetivety mivantana aminao izay hanamboatra ny iPhone eo an-toerana!
Amboary ny iPhone
IPhones taloha dia tsy namboarina hikirakira zoom zoom fakan-tsary betsaka. Ny iPhone rehetra alohan'ny iPhone 7 dia miankina zoom digital toa izay zoom optika . Mampiasa rindrambaiko hanatsara ny sary ny zoom nomerika ary mety manjavozavo, raha toa kosa ny zoom zoom dia mampiasa ny fitaovan'ny fakan-tsarinao ary mazava kokoa.
iphone 7 dia tsy handefa sary amin'ny android
Rehefa nandroso ny teknolojia dia nanjary tsara kokoa ny fakana sary iPhones vaovao kokoa amin'ny fakana sary amin'ny fampiasana zoom optika. Zahao ny fitaovana fampitahana finday amin'ny UpPhone hahitana iPhones misy zoom optika tena tsara. Ny iPhone 11 Pro sy 11 Pro Max dia samy manohana zoom optika 4x!
Afaka mahita mazava tsara aho izao!
Raikitra ny fakantsarinao iPhone ary afaka manohy maka sary mahafinaritra ianao! Manantena aho fa hizara an'ity lahatsoratra ity amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny olona fantatrao izay te-hianatra ny zavatra hatao ianao rehefa manjavozavo ny fakantsariny iPhone. Raha manana fanontaniana hafa tianao hapetraka ianao dia mametraha hevitra etsy ambany!
Nanazava ny fikirana fakan-tsary IPhone!
Ahoana ny fomba hanafoanana ny doka amin'ny paositra: Plugins Google AdSense ho an'ny WordPress
Ohatrinona ny mandoko fiara?
Fa maninona ny iPhone X Camera no mitsangana? Ity ny Marina!
Ny pensilihazo Apple dia tsy hampifanaraka amin'ny iPad-ko! Ity ny The Fix.
Mihetsika ny fanokafana ny chess: paikady 3 ambony ho an'ny mpandray anjara amin'ny Master
Ahoana no fomba hanampiako fanitarana amin'ny fifandraisana amin'ny iPhone? Ity ny The Fix!
Inona no dikan'ny hoe manonofy miaraka amin'ny diky?
Ahoana ny famonoana ny famakiana vola amin'ny Mac amin'ny dingana telo mora!
SOKAFY 7 HANATRANA NY Fifadian-kanina SY VAVAKA
Manana olana amin'ny baterinao iPad? Ity no tokony hatao rehefa lany haingana!
Ahoana no fanadiovana ny AirPods - ny fomba tsara indrindra sy azo antoka indrindra!
Tsy afaka tsindrio indroa handoa amin'ny iPhone? Ity ny antony & The Fix!
Azo averina amin'ny mpivarotra ve ny fiara ara-bola?
Fanampian'ny governemanta hividy trano voalohany
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hikarakara ny be antitra?
Fa maninona no maty haingana be ny bateriko Android? Ny mpamonjy aina finday bateria / tablette tsara indrindra!
Inona no dikan'ny hoe voafehy ao anaty nofy?